प्रवासबाट उदाउदै खोटाङ्गे ठिटो » Khulla Sanchar
प्रवासबाट उदाउदै खोटाङ्गे ठिटो
काठमाडौ : ‘तिम्रो साथ छुटे पनि’ बोलको गीत अडियो- भिडियो सार्वजनिक गरेर श्रोता र दर्शकको मन जितिरहेका दुर्ग बान्तावा हाल वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा रहेका छन् । प्रवासमा व्यस्त जीवन बिताइरहेका बान्तावाले हालसालै नेपालका ख्याति प्राप्त गायक राजेशपायल राई र मेलिना राईसंग पनि काम गरेका छन् । चार वटा गीतमा शब्द र संगीत भरेर रेकर्ड गरिसकेका बान्तावाको चाडै तीनवटा गीत पनि रेकर्ड हुने बताए ।
प्रवासमा बसेर सृजनामा लाग्नु अत्यन्तै गाह्रो हुदाहुदै पनि बान्तावाले आफुभित्रको जुनुनलाई त्याग्न नसकेको बताए । खोटाङको दुर्गम गाउँ काहुले गाविसमा जन्मिएका उनको रुची भने नृत्य रहेको थियो । नेपाल रहदा नृत्यको औपचारिक क्लास लिएका बान्तावाले आफ्ना गीतमा आफैले मोडलको भुमिका निर्वाह गरेका छन् । उनै दुर्गसँग हाम्रा सहकर्मी अनिल बान्तावाले गरेको कुराकानी :
गीत-संगीतमा कसरी प्रवेश गर्नु भयो ?
मेरो गीत संगीतमा लाग्ने रहर चै जब म बुझ्न र हिड्न थाले त्यो बेला बाटै हो। रेडियो अनि क्यासेटहरूमा गीत बज्थ्यो, म सोच्थे कि कसरी यो गीत बन्छ भनेर। बिस्तारै म ठुलो भए र मैले आफैले रेडियो किने त्यसपछिको पहिलो मेरो गीत संगीतमा रुचि अति नै बढाउने चाहि त्यहि रेडियो नै हो। र यसरी नै म आफ्नो कला लाई बोकेर भोैतारीएको लकभक धेरै सालपछि मैले २०७३ साउन ९ गते आईतबारको दिन मेरो शब्दमा बिनोद खम्बु दाजुको संगीतमा बहुचर्चित गायक राजेश पायल राई दाजुको स्वरमा बसन्त ऋतु जस्तै फेरीगयो मेरो जीवन… भन्ने बोलको गीत रेकर्ड गराउन सफल भएँ र यो गीतमा अहिलेकेै चर्चित गायिका मेलिना राई ज्युले पनि Female मा स्वर दिनु भएको छ । अति नै राम्रो छ तर यो गीत बजारमा आएको छैन । जुन म नेपाली भुमि टेक्न साथ दर्शक स्रोत माझ ल्याउनेछु । यसरी नै म गीत संगीतमा लागेको हुँ।
प्रवासमा बसेर गीत-संगीत सृजना गर्न कतिको गाह्रो छ ?
प्रवासमा बसेर गीत संगीत गर्न सोचेको भन्दा धेरै कठिनाइ छ । किनकि प्रवाशमा पहिलो प्राथमिकता भनेको आफ्नो डिउटिलाई दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले गार्‍हो छ प्रवाशमा। कतिपय कम्पनीमा मोबाइल बोक्न दिदैनन् । त्यस्तो अवस्थामा झनै गार्‍हो हुन्छ । मैले चाहि प्रवाश बाटै यो कार्य गरे । किनकि मेरो केही सजिलो छ काम । त्यसैले म केही सफल भएको महसुस गर्छु । तर गार्‍हो चाहीँ अति हुन्छ ।
तपाईको खास बिधा के हो ? संगीत, गायन कि गीत लेखन ?
मेरो खास बिधा भनेको केही छैन । म कता हो कता ? चर्चित हैन । यो नै बिधा मेरो भन्न मिल्दैन । किनकी म भनेको गीत संगीतमा केही नै गरेको छैन । मैले १०० मा ९५% अझै सिक्नु छ । त्यसैले यो हो भन्न मा सक्दिन । तर सानै बाटको सोच चाहि डान्सर बन्ने र हल्क फुल्का सिकेको पनि छु । तर समय संगै बदलिँदो रहेछ मन । आज भोलि किन किन खुब गीत लेख्न मन लाग्छ । मैले लेकेका सब्दहरू ४ आेटा रेकर्ड भैसके बाकि ३ आेटा तयारीमा छ । तर म यो नै मेरो बिधा भन्न सक्दिन।
गीत संगीतको अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?
गीत संगीतको अहिलेको अवस्था धेरै नाजुक छ । सबैले गीत संगीत नै गरिरहेका हुन्छन् । मेरो बिचारमा गीत संगीतमा प्रसस्त लाभ सोच्नु, देख्नु गलत हो । गीत संगीत भनेको एउटा भाग्य पनि हो । जुन आम दर्शकहरूले मनपराईदिनु भो भने राम्रो पनि हुन्छ ।
मोडलिङ पनि गर्नु हुन्छ, प्रवासमा कलाकार नपाएर कि आफैमा क्षमता छ भन्ने लागेर गर्नु हुन्छ ?
मोडलिङको कुरामा के छ भने यो अहिलेको गीतमा मैले नै शब्द रचना र संगीत पनि मैले नै गरेको हुदा मैले नै अभिनय पनि गर्नु पर्छ भनेर गायक भाई उपेन्द्र राईले मलाई प्रस्ताव गर्नु भो । उहाँलाई हृदय बाटै धन्यबाद भन्न चाहान्छु । मेरो डान्स हेरेर मैले नै गर्न सक्छ भनेर गायक भाईले मलाई मोडल पनि बनाई दिनुभो । यसरी नै मोडलिङ गरेको हुँ। र मेरो साकेला गीत छ । त्यसमा म आफैले फेरी अभिनय गर्ने सोचमा छु । र बिनोद खम्बु दाजुले पनि मलाई नै छान्नु भएको छ।